Ny marina, ary ny marina ihany… | NewsMada
Ny marina, ary ny marina ihany…
Andrasana ny marina momba ny raharaha fakana an-keriny sy fanaovana takalon’aina ireo ankizy roa, efa maty ny iray, tany Toamasina. Naiditra am-ponja vonjimaika ilay mpitsara hoe anisan’ny voarohirohy amin’izany.
Tena azo antoka tanteraka fa hamita hatramin’ny farany izao raharaha izao ny mpitondra na ny fahefana mpanatanteraka? Na misy aza ny fitsabahana toy ny fampiakarana aty Antananarivo ireo voarohirohy amin’izany…
Hazakazaka arahin-tosika izao. Ho hita eo ny farany. Raha mba toy izany avokoa re ny fikarohana ny marina eto amin’ny firenena? Mba tsy hisy intsony ny lehibe tsy meloka, na mitompo teny fantatra amin’izay lazaina sy atao.
Tena ho hita ny marina rehetra, araka izay tratra sy azo atao? Mba tsy hisy ny sakantsakana hanafenana na hanovana ny marina. Na ho sanatria karazana sarimihetsika avokoa izay miseho rehetra na ihazakazahana sy ikoropahana aza.
Na ahoana na ahoana, mbola be ny fanontaniana mihaohao amin’izao raharaha izao: inona, ohatra, no itsabahan’ny eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika, ka nampiakarana ireo voarohirohy ho aty Antananarivo haingana dia haingana?
Toy izany koa ny hoe: inona no tena antony manosika ireo mpaka an-keriny hanao iny fakana an-keriny iny? Vola antapitrisany euros no nangatahina, nihena an-toerana hatrany izany, ary hita be ihany nony farany.
Mandeha ny resaka fa mihodindokina amin’io raharaha io ny momba ny fitrandrahana sy fanondranana andramena. Hatraiza ny fahamarinan’izany? Andrasana sy takina ny tena marina hatrany ifotony sy hatrany am-piandohana.
Raha nihazakazahana be ny raharaha faramparany teo. Sanatria, hijanona tampoka? Mba tena ho hita ny marina. Miankina amin’izay ny fahatokisan’ny vahoaka ny fitondrana. Na fahefana mpanatanteraka io, na mpitsara.
Mba tsy hisy intsony ny ambonin’ny lalàna, ny fitsaram-bahoaka… Mby amin’ny hoe fanjakana tan-dalàna. Ny marina, ary ny marina ihany. Vato an-tanimbary io: raha tsy azon’ny angady lohataona, tratran’ny antsy fararano.